အမျိုးသမီးများ၏ဓမ္မတာ – BurmeseHearts
ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို ဖက်အဖြစ် တင်စားကြသလဲ? ရာသီပေါ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ ရာသီပေါ်ကြသလဲ? ရာသီသွေးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရာသီမှန် ၊ မမှန် ဘာကြောင့် သတိထားသင့်သလဲ? မမျိုးဥရှင်နိုင်တဲ့ရက်တွေက ဘယ်ရက်တွေလဲ? မမျိုးဥမကြွေမီ ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ရာသီမပေါ်တာ ဘာကြောင့်လဲ? ဘယ်အချိန်မှာ ကလေးယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလဲ? ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရသလဲ? ရာသီပေါ်ချိန် ဆက်စပ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား? ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အလားအလာများတဲ့နေ့တွေက ဘယ်နေ့တွေလဲ?
အမျိုးသမီးများ၏ဓမ္မတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် အမျိုးသမီးများ၏ဓမ္မတာ နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။